Icho chiratidzo cheICloud chiri pamberi pezita rezvishandiso muIOS chinorevei | IPhone nhau
Apple yaive imwe yemakambani ekupedzisira kumira kuendesa ayo ekupedzisira terminals aine yekuchengetedza inokwana 16 GB chete, nzvimbo iyo yatakambodzora mashandiro ehurongwa, tine zvishoma kudarika 11 GB, nzvimbo yatakamanikidzwa nayo kudzora nguva dzese izvo zvemukati izvo isu zvatakatora pasi kune yedu terminal.
Imwe neimwe nyowani vhezheni yeIOS inotipa mitsva mabasa, mabasa ayo pazviitiko zvakawanda vanoenda vasingazivikanwe nevazhinji vashandisi, kudzamara vazviwana netsaona kana mudziyo wako watanga kuita zvisingaite. Kana iwe wakambozvibvunza kuti chii chiratidzo cheICloud chine museve wezasi unoonekwa pamberi pezita rezvimwe zvinoshandiswa, ramba uchiverenga sezvatinokutsanangurira.
Nekusvika kweIOS 11, Apple yaida zvishoma bvuma kuti yaive mhosho kuti urambe uchipa mhando dzakaderera se16 GB uye akawedzera basa nyowani kuhurongwa hwekushanda, basa raive naro neataraini redu zvaro zvakabvisa zvikumbiro zvainge zvamira kushandiswa mumazuva makumi matatu apfuura, asi zvakachengeta magwaro aigona kuwanikwa mukati nguva dzose.
Iri basa haringotitenderi isu kusunungura nzvimbo tisingaone, asi zvakare rinotiratidza zvakajeka kana isu tichinyatsoda iko kunyorera pane kwedu kifaa, chikumbiro, kana mashandisiro, atisina kushandisa kwemazuva anodarika makumi matatu.
Kana tangotanga kuita basa iri, hatina kukwanisa kuziva kuti ndeapi mafomu aive abviswa neApple kubva kudhizaina chero nzira, kuti tizviratidze, ICloud chiratidzo chinowedzerwa nemuseve wezasi. Paunodzvanya pachishandiswa icho nechiratidzo cheICloud, iko kunyorera kuchadzikunura otomatiki uye wozovhura kuratidza mafaera ese atakagadzira mukati.
Maitiro ekudzivirira sei iOS kubva kudzima maapplication andisingashandise
Iri basa rinoitwa nekusarudzika nguva dzese patinoisa nyowani vhezheni yeIOS kana kutenga chitsva chiteshi. Kana iwe uchida kuimisa, unofanirwa kuenda kuZvirongwa> Chitoro cheTunes uye App Store uye kumisa tebhu Bvisa maapps asina kushandiswa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » Zvinorevei chiratidzo cheICloud pamberi pezita rekushandisa chinoreva muIOS
Ndatenda, zvakanaka kuziva, kunyange ini ndatarisa uye ndanga ndatobvisa iyo sarudzo.
Mamwe maApp ID anokiyiwa zvisinganzwisisike